यो बजारका लागि सजिलो छैन Martech Zone
मैले साझेदारी गर्ने धेरै लिंकहरू र यस ब्लगमा मैले लेख्ने पोष्टहरूका लागि कुञ्जी हो स्वचालन। कारण सरल छ ... एक पटक, मार्केटरहरूले सजिलैसँग ब्रान्ड, लोगो, एक जिंगल र केही राम्रो प्याकेजि withको साथ उपभोक्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछन् (म स्वीकार गर्दछु कि एप्पल अझै पनि यसमा उत्कृष्ट छ)।
माध्यमहरू एक दिशात्मक थिए। अर्को शब्दमा, मार्केटरहरूले कथा भन्न सक्दछन् र उपभोक्ताहरू वा B2B उपभोक्ताहरूले यसलाई स्वीकार्नुपर्‍यो… कति सहि थाल्यो। मार्केटर्ससँग राष्ट्रिय टेलिभिजन, channels स्थानीय रेडियो, अखबार, बिलबोर्ड, सम्मेलन, (मूल) पहेंलो पृष्ठ, प्रेस विज्ञप्ति र सीधा मेलका channels च्यानलहरू थिए। जीवन एकदम सरल थियो।
अब हामीसँग स्थानीय र राष्ट्रिय टेलिभिजनका सयौं च्यानलहरू छन्, स्थानीय र उपग्रह रेडियो, समाचार पत्रहरू, प्रत्यक्ष मेल, ईमेल, ब्रोशर शैली वेबसाइटहरू, ब्लगहरू, असीमित सामाजिक नेटवर्कहरू, बहु खोज इञ्जिनहरू, असंख्य सामाजिक बुकमार्किंग साइटहरू, माइक्रो-ब्लगहरू, आरएसएस फिडहरू, वेब डाइरेक्टरीहरू, बिलबोर्डहरू, प्रेस विज्ञप्तिहरू, ह्वाइटपेपरहरू, प्रयोग केसहरू, ग्राहक प्रशंसापत्रहरू, पुस्तकहरू, सम्मेलनहरू, चलचित्र थिएटर विज्ञापन, टेलमार्केटिंग, मिनी-कन्फरेन्स, विभिन्न पहेलो पृष्ठहरूको समूह, प्रत्यक्ष मेल, नि: शुल्क समाचार पत्र, मोबाइल मार्केटिंग, भुक्तान - क्लिक-क्लिक विज्ञापन, ब्यानर विज्ञापन, सम्बद्ध विज्ञापन, विजेट, भिडियो खेल विज्ञापन, भिडियो मार्केटिंग, भाइरल मार्केटिंग, व्यवहार लक्ष्यीकरण, भौगोलिक लक्ष्यीकरण, डाटाबेस मार्केटिंग, रेफरल प्रोग्राम, प्रतिष्ठा व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री, रेटिंग्स, समीक्षा ... सूची मा जान्छ र लगातार… र दैनिक बढ्छ।
दुर्भाग्यवश, मार्केटिंग विभागहरू माध्यमहरूको फराकिलो खाडलको साथ बढेको छैन, तिनीहरू वास्तवमा सिकिसकेका छन्। साथै, औसत मार्केटिंग विद्यार्थीको पाठ्यक्रम पछाडि पछाडि छ जहाँ हामीलाई उनीहरूको आवश्यक छ। म मद्दत गर्न सक्दिन तर हैन जब उनीहरू अन्तमा ढोकामा पुग्छन् तब औसत मार्केटिंग इन्टर्न कति ठूलो आँखाहरू हुनु पर्छ!
बजारलाई मद्दत चाहिन्छ
उही समयमा, इन्टरनेट - उर्फ सूचना सुपरहाइवे -, अन्तर्निहित रुचि सबैको लागि राय र संसाधनहरूको अन्तहीन आपूर्ति छ। समस्या यो छ कि रायहरु अनन्त छन् - र यो धेरै राम्रो काम गर्दैन।
यो मार्केटरहरूको लागि सजिलो भइरहेको छैन, त्यसैले तिनीहरू निरन्तर मद्दतको लागि पुग्छन्। तर मद्दतले तिनीहरूलाई सधैं सही दिशामा पुर्‍याउँदैन।
तपाईं कसमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ?
We पुरानो विद्यालय मार्केटरहरूले कसरी हाम्रो अभियानलाई प्राथमिकता दिनको लागि फेरि परीक्षण, नाप्ने, परीक्षण गर्ने र नाप्ने उपायहरू सिकेका छन् र लगानीमा फिर्ताको निरन्तर समर्थन गरिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक मध्यम शक्तिहरूको प्रयोग गर्दछ। हामीले स increase्ख्यालाई बढाउन कसरी स्वचालित गर्ने सिक्यौं कुञ्जीहरू हामीसँग ग्राहकहरू र सम्भाव्यताहरू थिए जबकि समग्र संसाधनहरू आवश्यक कम गर्दछ। हामीले यो हल्लाबाट संकेत कसरी छुट्याउने, व्यावहारिक अनुप्रयोगहरू मार्फत पढ्ने, र छिटो र क्रूरताका साथ सिक्ने कुरा सिक्यौं।
इन्टरनेटको आदर्शवादी मार्केटि advis सल्लाहकारहरू र अनुभवी पुरानो व्यवसाय पेशेवरहरूको माझ अहिले नै झगडा भइरहेको छ। हामीले पछिल्लो २० बर्षदेखि मध्यम मार्केट मार्फत हाइप मध्यम रूपमा पढ्यौं। आफैलाई एक पेशेवर खोज्नुहोस् जो यस मार्फत आएका छन् र जान्दछन् कि यो कसरी मौसम गर्ने।
तपाईंको व्यवसाय तपाईंले विश्वास गर्नेहरूमा निर्भर गर्दछ! सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले विश्वास गरेका व्यक्तिहरूसँग अनुभववाद आवाश्यक हुन्छ आदर्शवादको माध्यमबाट भाँच्न र के प्राप्त गर्न तपाईंको व्यवसायमा प्रबल हुन्छ।
टैग: बिभिन्न पहेलो पृष्ठहरुको गुच्छासम्बद्ध विज्ञापनब्यानर विज्ञापनव्यवहार लक्ष्यीकरणबिलबोर्डहरूब्लगब्रोशर शैली वेबसाइटहरूअसंख्य सामाजिक बुकमार्किंग साइटहरूग्राहक प्रशंसापत्रडाटाबेस मार्केटिंगप्रत्यक्ष मेलईमेलनि: शुल्क समाचार पत्रभौगोलिक लक्ष्यीकरणस्थानीय र उपग्रह रेडियोमार्केटिंग पुस्तकहरुमार्केटिंग सम्मेलनहरूमाइक्रो ब्लगहरूलघु सम्मेलनहरूमोबाइल मार्केटिङचलचित्र थिएटर विज्ञापनबहु खोज इञ्जिनहरूराष्ट्रिय टेलिभिजनसमाचार पत्रप्रति क्लिक विज्ञापन भुक्तान गर्नुहोस्प्रेस विज्ञप्तिमूल्यांकनरेफरल प्रोग्रामहरूप्रतिष्ठा व्यवस्थापनसमीक्षाआरएसएस फीडtelemarketingअसीमित सामाजिक नेटवर्कहरूप्रयोग गर्नुहोस्प्रयोगकर्ता उत्पन्न सामग्रीभिडियो खेल विज्ञापनभिडियो मार्केटिंगभाइरल मार्केटिंगवेब निर्देशिकाहरूwhitepapersविजेट
तिमी सत्य बोल्छौ। जब म मेरो मास्टर डिग्रीमा घुँडा टेकेको थिएँ, मैले धेरै चाँडै थाहा पाएँ कि विभागले हाम्रो सन्देश सञ्चार गर्न कुन मिडिया उपकरणहरू छन् भन्ने बारे उनीहरूको ज्ञानमा ढिलाइ भएको थियो। एक जनसम्पर्क पेशेवरको रूपमा, मलाई टेक्नोलोजीको नजिक रहन गाह्रो छ।
तर यदि मैले एउटा कुरा सिकेको छु भने। यो मूल्यवान छ प्रवृत्तिहरू अध्ययन गर्न। मानिसहरूले सञ्चार गर्न के प्रयोग गरिरहेका छन् र उनीहरूले के प्रयोग गरिरहेका छैनन् हेर्नुहोस्। निस्सन्देह, जब हामी दर्शकहरूलाई विभाजन गर्न थाल्छौं त्यो अझ जटिल हुन्छ।
अन्तमा, मलाई लाग्छ कि मानिसहरूले सञ्चार गर्न प्रयोग गर्ने सन्देश सञ्चार भइरहेको भन्दा कम महत्त्वपूर्ण छ। यदि सन्देश सरल, आश्चर्यजनक, विश्वसनीय, ठोस छ, भावनाहरूलाई छुन्छ र कथा बताउँछ, त्यसपछि यसले लगानीमा राम्रो प्रतिफल उत्पन्न गर्दछ, जुन डलर र सेन्टमा मापन गर्नुपर्छ, तर कसरी सम्बन्धहरू निर्माण र कायम भइरहेको छ।